Perm Eyelash - Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato | Bezzia
Susana godoy | 13/09/2021 10:00 | Quruxda
Indhashareerka waa inay had iyo jeer daryeeshaa, maxaa yeelay waxay na siin doonaan weji badan oo wejiga iyo sababta oo ah waa qayb aasaasi ah. Sidaa darteed, daaweynta dhexdeeda oo aan ka heli doonno iyaga, waxaan leenahay baalasha indhaha. Malaha wax badan ayaad ka maqashay hadda.
Waa hagaag hadda waxaan nadiifin doonaa dhammaan shakiga had iyo jeer laga abuuro agagaarka. Tan iyo haddii aad rabto hel aragti aan dhammaad lahayn waad ku mahadsan tahay indhahaaga, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waa hubaal inaad meel kasta oo aad tagto aad ku soo jiidan doonto qaab gaar ah.
1 Waa maxay baalasha indhaha?
2 Muddo intee le'eg ayay baalasha indhuhu socotaa?
3 Waa maxay farqiga u dhexeeya kor u qaadista iyo indhashareerka joogtada ah
Waa maxay baalasha indhaha?
Waxaan dhihi karnaa indha -indheynta indha -indheynta waa daaweyn isku duuban. Waa run inaanan ku arki doonin hirar, laakiin waxaa loogu yeeraa curling maxaa yeelay waxay aad uga calaamadsan tahay muuqaalka saamayn qaloocan. Runtii saamaynta ugu dambaysa ayaa ah inaan ogaan doonno sida indhashareerka uu aad ugu dheeraado.. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay nooc jel ah oo hagaajin doona habka iyo sidoo kale curlers ama rollers. Waxaas oo dhami waxay gaar u yihiin aaggan, dabcan. Sidaa darteed natiijadu waxay noqon doontaa indhashareer dhaadheer oo dabiici ah, oo aad u dheer. Markaa, sidaan hore u soo sheegnay, waxay si weyn u qaabayn doontaa aragtidaada oo waxaad ku raaxaysan doontaa dhammayn dareen badan.
Muddo intee le'eg ayay baalasha indhuhu socotaa?
Runtu waxay tahay inay tahay daaweyn qaadata hal saac, laakiin markaas waxay socon doontaa muddo dheer. Sababtoo ah waxaan ku qaadan karnaa ilaa 3 bilood inaan xirno natiijada indha -indheynta. Waa run in tabyo cusubi soo muuqan doonaan waqtigaan oo dhan. Sidaa darteed, natiijadu xoogaa way kala duwanaan kartaa, maadaama qaarkood loo arki doono kuwo qaloocan oo kuwa cusub, aan ahayn. Marka, dhowr bilood ka dib waxaa lagugula talinayaa inaad ku laabato xaruntaada quruxda si aad u siiso gacan cusub. Waxaad hore u ogtahay in marka daaweynta la adeegsado, natiijooyinka isla markiiba la arko, markaa waxaad mar kale ku raaxaysan doontaa muuqaalkaas cajiibka ah ee aad u jeceshahay.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kor u qaadista iyo indhashareerka joogtada ah
Waxaan hore u sheegnay in baalasha indhuhu ay tahay daaweyn lagu duuduubo. Maxaa keenaya inaan helno mid ka mid ah kuwaas waxay u egtahay XXL. Haddii aad hore u lahayd baalasha dhaadheer, way kuu fiicnaan doontaa maxaa yeelay waxaad siin kartaa xitaa qaab ka sii badan natiijaduna waxay ahaan doontaa mid dabiici ah.
Dabcan markaan ka hadlayno kor u qaadista indhaha waxaan u jeednaa daaweyn loogu talagalay dadka leh indhashareerka waxoogaa gaagaaban. Sababtoo ah geeddi -socodkani wuxuu ka dhigaa inay fidiyaan laakiin waxay ka soo jeedaan qaybta xididka, taas oo waliba naga tagaysa saamaynta indhashareerka dhaadheer. Sidaa darteed perm -ku wuxuu siin doonaa dhammaystir qaloocsan oo wiishku si buuxda ayuu u fidin doonaa. Geedi socodku sidoo kale wuu ka duwan yahay, maadaama curlers iyo jel hagaajinta loo baahan yahay perm, laakiin kor u qaadista, baalasha ayaa la kala saaraa, laga bilaabo saldhig la dhigo aagga indhaha.
Markaa, waxaan dhihi karnaa taas dhammaantood waa daaweyn kala duwan, taas oo aad isku dayi karto labada xaaladoodba, maxaa yeelay waa inaad ogaataa waxaad runtii u baahan tahay ama waxa aad ugu jeceshahay. Sidaa darteed, maahan inay adiga kuu ahaato mid gaar ah. Waxaad dooran kartaa inaad naftaada kaxayso labada si aad u aragto kan ah kan ugu wanaagsan wajigaaga. Laga soo bilaabo, waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad ku dabaqdo nooc ka mid ah fuuq -baxa indhahaaga si aad u daryeesho geedi socodka, sida dhibic saliid ah, uma baahn doontid mascara maxaa yeelay muuqaalkaagu wuxuu ahaan doonaa mid quruxsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Indha -indheynta: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
5 cunto si loo wanaajiyo socodka mindhicirka